पुरुषलाई थाहा नहुने महिलाका ७ रहस्य ~ FMS News Info
धेरैजसो पुरुषहरुलाई महिलाको बारेमा त्यत्तिमात्र थाहा हुन्छ जति उनीहरुले देखे तथा सुनेका हुन्छन् । सतहमा देखिने आचरण, व्यवहार तथा जिउडालको बारेमा जानकार भएपनि धेरैलाई महिलाहरुका अन्तरंग रहस्यहरुका बारेमा थाहा नहुन सक्छ । महिलाहरुको बारेमा मनोविज्ञहरुले समेत भन्ने एउटा कुरा के हो भने उनीहरु वास्तवमै रहस्यमयी हुन्छन् । उनीहरुको मनमा यस्ता रहस्यहरु लुकेका हुन्छन् की जो अरु कसैलाई भन्दैनन् ।
कुनै पुरुषले महिलाको बारेमा आफुलाई सबैकुरा थाहा छ भनेर घमण्ड गर्छ, चाहे त्यो आफ्नै जिवनसंगिनीको किन नहोस्, भने त्यस्तोे पुरुषको तुजुक पूर्णतः मिथ्या सावित हुनसक्छ । किनकी आम महिलाहरुसँग यस्ता रहस्य हुन्छन् जो उनीहरुलाई कसैलाई पनि बताउँदैनन् ।
त्यस्ता ७ रहस्य यस्ता छन् :
महिलाले अर्को महिलालाई पनि माया गर्छन् । प्रायः महिलाले अर्को महिलालाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी तथा दुस्मन ठान्ने गर्छन् भनिन्छ । तर विभिन्न सर्वेक्षणले के देखाएका छन् भने एक नारीले अर्को नारीलाई पनि खुबै माया गर्छन् । महिलाहरुलाई अर्को कुनै स्टाइलिस महिलालाई हेर्न निकै मज्जा लाग्छ ।
महिलाहरुले खुबै चियोचर्चो गर्छन् । त्यस्तो चियोचर्चो आफ्नो वर्तमान जिवसाथी तथा सरोकारको मान्छेको बारेमा मात्र हुँदैन । आफ्नो भुतपूर्व प्रेमीको बारेमा पनि उनीहरु खुबै चियोचर्चो गर्छन् । आफ्नो भुपु अहिले को सँग छ ? उसकी नयाँ प्रेमिका कस्ती छे ? उनीहरुको जीवन कसरी चलिरहेको छ ? भन्ने बारेमा कुनैपनि महिलालाई निकै ठूलो चासो हुन्छ ।
विभिन्न अध्ययन अनुसार पोर्न सामाग्री हेर्ने मामिलामा महिलाहरु पनि पुरुष जत्तिकै पारखी हुन्छन् । तर आफ्नो त्यो इच्छा तथा बानीलाई उनीहरुले अरुसामु खुलासा गर्ने तथा स्वीकार गर्ने काम पनि सित्तिमित्ती गर्दैनन् ।
महिलाहरुलाई आफ्नो जिउको माया अति नै हुन्छ । एक्लो हुँदा वा काम नहुँदा महिलाहरु आफ्नो जिउका अंग अंग हेरेर त्यसको रहस्य पत्ता लगाउने धूनमा भुल्दछन् ।
एक्लो हुँदा महिलाहरुलाई निकै अनौठो शोख चल्दछ । सर्वेर्क्षणका अनुसार आफ्नो गोप्य अंग नियाल्ने देखि लिएर विकिनी लगाएर नाच्ने तथा थरीथरीका पोज दिने गर्छन् उनीहरु ।
महिलाहरु आफ्नो महिनावारीको विषयलाई ठूलो बोझ ठान्दछन्, खासगरी बिहेपछि । आफ्नो पुरुष पार्टनरले यस्तो मासिक चक्रको झण्झट बेहोर्नु नपर्ने तर आफुले मात्र त्यो दुख झेलिरहनुपर्ने कुराले गर्दा उनीहरुमा पुरुषप्रति एउटा इष्र्या पलाउँछ । पुरुषले पनि यस्तो महिनावारीको जस्तै पीडा खप्नुपरोस् भन्ने भित्री इच्छा हुन्छ उनीहरुमा ।
महिलाहरुमा आफ्नो पुरुष पार्टनरप्रति धेरथोर शंकाले सधै गाँजिरहेको हुन्छ । आफ्नो पार्टनरले केही न केही कुरा आफुसँग लुकाइरहेको छ भन्ने लाग्छ । र त्यो कथित लुकाएको कुरा जान्नका लागि उनीहरु सदैव उत्सुक रहेर अनेक प्रयास गर्दछन् ।